Biriq ayaa dishay 323 deer oo Norway ku nool | Saadaasha Shabakadda
Duufaannada, marka lagu daro dhacdooyinka saadaasha hawada ee layaabka leh, sidoo kale waxay noqon karaan kuwo aad khatar u ah haddii aadan heli karin meel aamin ah si aad uga ilaaliso hillaaca, waana wixii ka dhacay Norway. Halkaas, ilaaliye Seeraha Qaranka ee Hardangervidda ayaa is arkay 323 deer dhintay. Iyo maya, maahan sheekooyin saynis, inkasta oo ay u egtahay inay u egtahay.
Sida muuqata, sida uu sheegay, waa markii ugu horreysay ee duufaan ay disho xoolo aad u tiro badan, marka ma garanayo hubaal sababta ay u dhacday iyo sida ay u dhacday.
Qaarkood waxay u maleynayaan inay ahayd shaqadii isbeddelada ka dhacaya cimilada, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inay tahay wax qarsoon oo aan la xallin. Sidaas oo ay tahay, deeraha ku jiray baarkinka waxay u badan tahay inuusan haysan waqti uu ku raadsado god ama hoy, laakiin waayo? Sidee loo sameeyaa falaadho iyo xawaare intee le'eg ayay ku garaacaan dhulka?
Fallaadhaha waxaa la soo saaraa inta u dhexeysa daruuraha iyo dusha sare ee dhulka, ama inta u dhexeysa laba daruurood, sababo la xiriira isdhexgalka u dhexeeya walxaha togan iyo kuwa taban, oo dhacaa in ka badan 5000 mitir oo dherer ah. Halkaas waxa ku dhaca shixnadaha barafka leh kristantiyada barafka, sidaasna markii la sameeyo, jajabku wuxuu helayaa xukun wanaagsan oo kristantarrada ayaa lagu eedeeyaa diidmo. Sidaa darteed, kiristaalo baraf ah, oo ka fudud roobab dhagaxley ah, ayaa loo jiidayaa xagga sare ee daruuraha tooska u koraya, Cumulonimbus In sidan, joog dhererkiisu u dhexeeyo 8 ilaa 10km waxaa jira khidmad togan, qiyaastii 5kmna waa mid taban, sidaasna soo saaris dheecaan koronto ah. Waxayna qaadaneysaa inyar oo ilbiriqsi ah in lagu garaaco dhulka (ama badda)!
Laakiin weli macquul maahan in la ogaado sida ay danab u dishay in ka badan 300 oo deero, in kastoo qaarkood ay isku dayeen inay sharraxaad ka bixiyaan, sida John Jensenius, oo ka tirsan National Oceanic and Atmospheric Institute of the United States, oo sheegay inay u badan tahay in danab ayaa ku dhacay xayawaan taasna sidii ay koox koox ugu ahaayeen, kan hadda dhulka laga soo saaro ayaa wada dilay. Sikastaba xaalku ha ahaadee, sida uu sheegayo Kjartan Knutsen oo ah sarkaal ka tirsan wakaaladda deegaanka Norway, Jimcihii, Agoosto 26, 2016, waxaa deegaanka ka jiray duufaanno waawayn, laakiin waligood horay uma arkin wax sidan oo kale ah.
Nota: Si aan loo dhaawicin xasaasiyadda akhristaha, waxaa la doortay in aan la dhigin sawirrada meydadka deerada. Haddii ay dhacdo inay rabaan inay is arkaan, waa la samayn karaa halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Biriq ayaa dishay 323 deeraha Norway jooga